Sheeko lagu cibraqaadan karo nolosha
» Sheeko lagu cibraqaadan karo nolosha
Waa qormo mida ugu xanuunka badan waa qiso hadaa aqriso sababeyso in indhahada adigoo fileyn ilin xanun badan kasoo dareerto waa sheeko dhab udhacday o badaleyso mar qura dareenkaaga waan hubaa ilaa dhamaadka sheekadan hadaa sifiican iila socoto xanunka uukugaarayo ciil dartii sidii qof aay kudhacday sheekda aad u ilmeyneyso jirkaadana udanqanayo sida aan anigaba ugu danqaday wadnaheygana ugu go’I la’dahay. Hadii aad tahay qof uur leh ha ila socon sheekadan oo halkaad joogto ugu har waa sheeko aad udheer xanunka aay kudhamaneysana weligaa aadan iloobi doonin. Waxey kamid tahay qisooyinka dhabta ah iyo musiibooyinka somalida kudhaco kuwa ugu xanuunka badan, aqristayasheena sharafta lahoow yaanan war kugu daalin adiga ila arki doono danqashadan uusan qalbiga xamili Karin ee dhamaan jirkaada iyo xasuustaada saameyn kuyeelan doonto.
Sidaan ogsoonahay waxaa na naafeeyay dagaalo hanoqdaan kuwo sokeeya ama kuwa dowlado nala deris ah ama dowlado shisheeye kuwaasoo dalkeena mar qura ubadalay qabuuraha bini aadamka lagu aaso, taasoo sababtay intii awood uyeelatay iney kahaajiraan colaadahan dabada dheeraada oo noqday tusbax mar qura furmay oo sii daadano aan joogsi laheyn ama galas caano ah oo mar qura daatay ma ahan dagaalada wax joogsanayo waa wax marba marka kasii danbeyso sii kordhayo. Sidaa awgeed waalidiinteena ayagoo ilmahooda dhibaatada xanunka badan kala cararayo ayey ilmahoda qurbaha sidii ay ugu soo diri lahaayeen xooga saaraan waalidiintana ayagoo isku reebayo dhibaatada, waalidkii nasiib u helaana ilmaha horay usoo raaco. Sidaa daraadeed Somali badan ayaa soo wada baxday haba ubadnaadaan dhalinyaro oo waalidiinta in kooban hanoqdaan. Hooyo kamid ah hooyooyinka soomaliyeed ayaa sanadii 2007kii usoo dirsatay wiil wiilasheeda kamid ah wadanka south Africa si uu ugu soo shaqeeyo dhibaatadaana uu ugu dheeraado hooyadaa ayaa waxaa ifka waxaa ugu haray labo wiil ayado isla sanadkaas ay kadhinteen aabihii 3 wiil iyo gabar iyo gabar kale oo habaryar u aheyd oo ayada soo korsatay marqurana hal meel oo guriga kamid ah kuwada dhintay ayagoo wada qadeynayo uu halkaas madfac wiifayo uu ugu yimid waa aduun iyo murugadiisee labadii wiil iyo ayadaa ifka kusoo haray sidaa darted aye ugo’aansatay in wiilsheeda si ay ubadbaadaan dalka ugu bixiso wadamada somalida usoo yaacday ay ugu soo idirto wiilkii yaraa oo 16 jir ah ayaa soo baxay halka midkii weynaa oo 20 jir ahaa uu dhahay hooyo marka waxbarashada dhameysto ayan hadda baxayaa . Sidaa awgeed wiilkii yaraa ayaa south Africa soo aaday lama ogo waxa ugu soo horeyo iyo xaalkiisa siduu ahaan doono nasiib wanaag wiilkii wuu nabad yimid wadanka south Africa oo hooyadii waay kufaraxday ayadoo isleh wiilkaaga madaafiicdan dadka lagu tijaabanayo waa kabadbaaday ee ilaah wiilkan kale mar lee asne hakuu baxo. Yarki wadanka south Africa joogay ayaa shaqo bilaabay oo cida bilaabay inuu biilo ama wiilkii kaweynaa oo waxbarashada lacagta kadabaro waqtiga wuxuu gurmaba waxaa lasoo gaaray sanadii 2008 Nasiib xumo waxaa dhacay dagaal aad uqaraar oo xiligaas udhaxeeyay ciidamada ithopia iyo dhigeedii kazoo horjeeday. waad ogatahay markuu dagaal xun dhaco cida intee garab saaran karto ayey garabka saartaan wee dhaqaaqaan ayagoo garaneyn meel aay udhaqaaqaan hooyadii iyo halkeedii wiil ayaa ayagana qaxay nasiib wanaag waxeey dhaqaaaqaanba sii lugeeynba waa ay ka baxeen magalada muqdisho nasiib wanaag inyar oo lacag aay haaysteen aye baabuur kuraacaan baabuuurki wuxuu geeyay tuulo aaysana cidne kagaraneyn meeshii aye iska dageen cid caawineyso malahan guri yar aye meeshii ayuu ku ijaarteen intii yareyd aay haaysteen. Nolosha ayaa kuxumaatay waayo mahaaystaan wax aay wax kucunaan malahan wiilkii south Africa asne sidii uwacayeen waa kudaalaan oo markii number kale uukasoo wici jiray ay kawaceena waxaa loosheegay inuu mar hore katagay dukaankii uujoogayna dadkii joogay aay dhinteen qaarne aay dhaawacyihiin asigana labadaba kuma jiro oo mahaayno aye dhaheyn intii yareyd aay lacag haaysteen teleefankaa ayey ugu dhamaatay. Hooyadii markii aay hadalkaa maqashay wadno xanuun ayaa kukacay oo waa ayjiratay tacbaan aye noqotay dhimasho iyo nolol midna maahan waa aduun iyo xaalkiisa xun. Wiilkii wax uusameeyo malahan haduu dhaho waxaan magaalada kasoo raadinayaa ama dad dad muslinimo nocaawiyo ayan baadi goobayaa hooyadii kama tagi karo ayadoo xanuunsan hooyadiina waxey kuhadaaqeysa hooyo waan kuduceeyay ee hadan dhinto wadankan iskaga tag oo aderka oo aabahaa kuhooyo ah ayaa magaalada b/weyne joogo utag oo inyar aad ugu baxdo weeydiiso ane waan kuuduceyay hooyo ilahne hakula garab galo anne xaalkeyga illaah baa gar anayo intaa ayey iskaga hadaaqeysaa. Wiilka uma jawaabi karo oo dhuunta ayaa xiran ilmada kasocoto oo kadaadaneysana hooyadiis uu kudulfooraro waa qoysay.
Waa sheekadeenii Ilmadeydu Miyeey Dhiig Isku Badashaa iyo qeybtii labaad runtii waa sheeko aad uxanuun badan welibana dhibaatooyinka somaliya kataagan sabab unoqdeen qoys mudo wada noolaaa maantay aan jirin intoodii muhiimada qoyska aheyd. Intaanan gudo galin qeybteena labaad aan uduceyno dhulkeena dhibaatada kuraagtay inuu ALLAH SWT kaqaado qof walbana siniyad buuxdo ah ha ugu duceeeyo. Runtii waxaan nabada laheli la’nahay ayaa ah qofka kugu horeeyo hadad dhahdo Somalia inee nabad noqoto Malaga yaabaa wuxuu kuugu jawaabayaa waxaa macquul ah 2050 inee nabad noqoto runtii quluubteena waxaa hareeyay inaanan aaminsaneyn dhulkeena oo nabad ah sidaan midaa u aaminsanahay hadu qof weliba u aamino inuu nabad dag dag ah dhulkeena noqonayo waa hubaal waa noo noqonayaa ee anagaa aaminsan colaaada warku yuu ila taginee aan gudo galna sheekadii iga ilmeysiiisay qeybteedii labaaad aan idin xusuusiyo intii noogu danbeysay qeybtiinaa hore. Hooyadiina waxey kuhadaaqeysa hooyo waan kuduceeyay ee hadan dhinto wadankan iskaga tag oo aderka oo aabahaa kuhooyo ah ayaa magaalada b/weyne joogo utag oo inyar aad ugu baxdo weeydiiso ane waan kuuduceyay hooyo ilahne hakula garab galo anne xaalkeyga illaah baa garanayo intaa ayey iskaga hadaaqeysaa. Wiilka uma jawaabi karo oo dhuunta ayaa xiran ilmada kasocoto oo kadaadaneysana hooyadiis uu kudulfooraro waa qoysay. Nasiib darro wiilkii asagoo hooyadiis ku dul ooynayo ayey nafta kabaxday hooyadii saacado badan ayuu meydkeeda iskaga dul ooynayay kadib ayaa kusoo baxay dadkii goobtaa kadhawaa wiilkii oo hooyadiis oo meyd ah kudul ooynayo ayaaa loo imaaday dadkii waxey xaqiiqsadeyn in hooyadu dhimatay dadkii kusoo baxay oday kamid ah ayaaa kafaallo qaaday kafanteeda iyo qabri qodkeeda Illaaahayoow Umadeena ugargaar dadkeeda uma maqnee adaa umaqan goor weliba alahayoow. Hooyadii halkaa ayaa lagu aasay wiilkii odaygii hooyadiis kafaalo qaaday ayaa dhahay wiilkeygoow gurigeyga iska joog waan is wareysan doonaa. Hal isbuuc wiilkii markuu gurigii joogo nuuxsi laheyn ayuu odaygii wareystay wiilkuna wuxuu usheegay in adeerkiis magaalada B/weyne joogo. Odaygii ayaa kucaawiyay lacag uu jid mar kadhigto iyo mid uu magaalo Madaxda hiiraan kugaaro asagoo kuhubsaday baabuuur wuuna uduceeyay in badan. Wiilkii wuxuu soo socdaba wuxuu soo gaaray magaaladii uurabay asagoo garaneyn meel uu tallo kabilaabo adeerkiisna wax number ah kama haayo cidiisana waxaa isku danbeysay mudo laga joogo dhowr iyo toban sano nasiiib wanaag wuxuu garanayay magaca adeerkiiis kaasoo kacaawiyay inuu helo inkastoo maalmo uu dhex maquurinayay magaaalada B/weine ugu danbeyntiiina hellay. Wiilkii ayaa usheegay adeerkiis arinta kuhabsatay reerkii nasiib wanaag adeerkii ayaa markii loosheegay dardaarankii udanbeeyay ee hooyadu bixisay oo ahaaa wiiilkeygoow adeerkaa raadi utag Wadanka somaliyana dhamaantiis iskaga tag walalkaa aan mudo moogeyn meel uukudanbeeyo asagana aanan garaneyn raaadi oo south Africa iska tag intaad dunida saarantahayna ducadeyda yaan kaagatagay. Adeerkii ayaaa markuu hadalkaa maqlay ilmadiisu buuxisay gadhkiisa misana hanta wanaagsan soo siiyay oo usoo masaafuriyay wadanka south Africa markaa tagtana iisoo sheeg dhahay hanti aad shaqo kubilowdo anaa kuusoo diri dooono. Waxa dhici doono lama ogeee uurxumo kale ayaaba udhiman wiilka marba haduu imaado wadanka south Africa taasoo oo gaarsiin doonto inuu haligo nafsadiiisa. Inta maqaalkeena kadhiman uga bogo qormadeena xigta. Waad kumahadsantahay aqriskaaga sharafta leh mar welibana walaalahaaga iyo waalidiinteena Somali kuhadhay uduceey mar weliba aad tukato.
Anonymous8/25/2011goor mee dhamays tiraysaan ma i sheegi kartaa waqti si aan i la socda inta ka dhiman ....... mahadsanidiinReplyDeletemahad tohob3/10/2014runtii waa sheeko naxdin iyo uur kutaalo leh lkn waxaa wanagsaned inaad sii dhameeystirtaanReplyDeleteAdd commentLoad more...